Marina Music Player, egwu dị egwu maka gam akporo | Gam akporosis
Francisco Ruiz | | Ngwa gam akporo, Egwu efu, Nyocha
Otu n'ime ngwa ndị niile chọrọ ngwa ngwa nke ndị ọrụ gam akporo niile, n'ụzọ ezi uche dị na azụ Ihe ntinye gam akporo, O doro anya na ndị egwu egwu maka gam akporo. N'okwu a, anyị chọrọ ịkwado ọzọ ezi music player kpam kpam free na ọtụtụ kwukwara functionalities.
Aha nke ngwa ahụ, nke anyị ga-esi nwee ike ibudata ya na gọọmentị site na Playlọ Ahịa Play nke Google, bụ Marina Egwuregwu egwu, a na-akpali akpali music player na niile ịke akara iji ihe Design Google kwadoro maka ngwa gam akporo.
1 Kedu ihe Marina Music Player na-enye anyị?
2 Ihe editọ kwuru:
Kedu ihe Marina Music Player na-enye anyị?
Otu n'ime isi omume ọma ka ọ pụta ìhè nke a ezigbo ihe ọkpụkpọ egwu maka gam akporoAnyị nwere ike mata ya kwesiri ntukwasi-obi na- Gam akporo Lollipop Ihe Design. Nlekọta anya na oke nke na-enye anyị ahụmịhe onye ọrụ na-enweghị atụ yana yana arụmọrụ ma ọ bụ nhọrọ niile a ga-edozi na mkpịsị aka anyị na ntanetị ole na ole.
N'etiti ya nanị functionalities Ọ bara uru ịkọwapụta njirimara ndị a:
Gam akporo Lollipop Material Design interface.
Ngwakọta nhazi 7-agwakọta.
Mkpọchi ihuenyo wijetị nkwado na gam akporo nsụgharị 4.0 na elu.
Ndakọrịta na-ele lyrics nke songs.
Nkwado site na itinye wijetị na ogwe ngosi maka njikwa ngwa ngwa nke egwu egwu.
Integrated search engine ịchọta ihe ọ bụla song gị music n'ọbá akwụkwọ.
Scrobbling dakọtara site na FM ikpeazụ.
Ekwe omume nke na-eji na agba nke album art na-akpọ dị ka agba nke ngwa.
Id3 mkpado editọ.
Ndakọrịta na otutu isiokwu a na-ebudata site na Playlọ Ahịa Google.
Oge ụra ma ọ bụ oge ụra.
6 Agba agba.
Enwere ike imezi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ ọ bụla nke ngwa ahụ.
Ndepụta nlele na echiche grid.
Enyocha akwụkwọ ozi ederede n'ime ngwa ahụ.
Ekwe omume nke na nbudata na-efu album mkpuchite.
Ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ.
Iji budata ya, ihe niile ị ga - eme bụ ịgafe njikọ ndị a wee budata ngwa ahụ na a kpam kpam free na ukara site Google onwe ya ngwa ahịa.
Onye egwu egwu Mp3
Ihe editọ kwuru:
Marina Egwuregwu egwu
Onye edemede: 0%
Ekike di egwu kwesiri ntukwasi obi
Ofụri Esịt configurable si mwube gị
Ike 7-gbalaga EQ
N'agbanyeghị nke ahụ atụle beta
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Egwu efu » Marina Music Player, ọzọ dị mma music player kpam kpam free na ọtụtụ functionalities
Ndewo, ana m atụ aro isiokwu: gịnị kpatara nyocha ngwaahịa niile na-ebu ụzọ gosipụta interface nke ngwa ahụ, ọkachasị "Oh, Ihe eji emepụta ihe", ma ọ bụ "Wow, Design Design", wee hapụ ọrụ bara uru ma dị ịrịba ama nke ngwa ahụ maka oge ọzọ? ngwa, na ihe ikpeazu (oburu na ha tinye ya) ikikere ha gha acho? N'ihi na enwere m echiche na ụfọdụ ihe ndị dị mkpa hapụrụ, na Google nwere mmetụta dị ukwuu na Nhazi Ihe ya na ọ bụ ihe mbụ igosipụta. Ezi echiche.
na songs si songslover ezi peeji ibudata music hehe
Zaghachi Jesús Merideño Galán
Ndewo, ị maara ngwa ọ bụla enwere ike iji mee #NowPlaying na nke na-etinye mkpuchi album ahụ? onwere ngwa na iOS nke m jiri na ipod m gara aga mana enweghi m ike ihu onye di ka ya na android, ekele, ekele
Zaghachi Luis Enrique CM
Kedu ihe kpatara njikwa anaghị apụta na mkpọchi akpọchiri, na mbụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị ugbu a?
Zaghachi JP Sanchez
Ngwaọrụ 5 kacha mma inye onyinye n'ụbọchị Nna